Hagaha Socdaalka Marseille Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteellada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Marseilles waa magaalada labaad ee ugu dadka badan Faransiiska (iyo magaalada saddexaad ee magaalooyinka) dekedda ugu weyn ee dhex-dhexaadka ah iyo xarunta dhaqaalaha ee gobolka Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sannadkii 2013-kii magaalada (iyo gobolkeeda) waxay ahayd Caasimaddii Dhaqanka ee Yurub, dhacdooyin fara badan oo is-daba-joog ah ayaa ka dhacay, waxaana la furay dhowr kaabayaal cusub. In 2013 Marseille sidoo kale martigalisay EuroPride.
Marseille waxay leedahay taariikh adag. Waxaa aasaasay Phoceans (oo ka yimid magaalada Greek ee Phocea) 600 BC waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn Yurub. Magaaladu waa ka fog tahay sawirada Cézanne iyo buugaagta Provençal ee tuulooyinka hurda, ciyaartooyda "pétanque" iyo sheekooyinka Marcel Pagnol. Ku dhowaad hal milyan oo qof, Marseille waa magaalada labaad ee ugu weyn Faransiiska marka la eego tirada dadka iyo tan ugu weyn xagga aagga. Dadkeedu waa dhari dhab ah oo dhalaalaya dhaqamo kala duwan. Waxa kale oo la sheegay inay Marooille ku nool yihiin dad badan oo Comoriyaan ah oo ka badan kuwa Comoros! Runtii, dadka Marseille waxay leeyihiin qowmiyado kala duwan, iyadoo in badan oo Talyaani iyo Isbaanish ah ay u soo haajireen aagga Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka dib.
Dadka aan ka baqaynin inay ogaadaan meel dhab ah dadka dhabta ah, Marseille waa meesha. Laga soo bilaabo suuqyada midabada leh (sida suuqa Noailles) oo kaa dhigi doona inaad dareento inaad joogtid Afrika, Calanques (aag dabiici ah oo buuro waaweyn ah oo ku dhacaya badda - Calanque waxaa loola jeedaa fjord), laga bilaabo aagga Panier (meesha ugu da'da weyn magaalada taariikh ahaanna halka ay dadka cusubi ku rakibeen) Vieux-Port (dekeddii hore) iyo Corniche (waddo ku teedsan badda) Marseille xaqiiqdii wax badan baa la siiyaa.
Iska ilow Canebière, iska ilow "savon de Marseille" (saabuunta Marseille), iska ilow khuraafaadka, oo kaliya ka soo qaado l'Estaque ilaa Marseille. Ma iloobi doontid.
Xafiiska de Tourisme et des Congrès de Marseille (Xafiiska Dalxiiska ee Main), 11, la Canebière,. M-Sa 09:00 - 07:00, Su iyo ciidaha 10:00 - 05:00. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Madaarka Caalamiga ah ee Marseille-Provence (qiyaastii 30 km u jirta Marseille). Basaska, tagaasida iyo hadda tareenku waxay ku xirmaan wax ka yar 30 daqiiqo. Adeegyada safarka ee ka imanaya magaalooyinka kale ee Yurub waxay ka sameeyeen meelo badan Marseille.
La Navette Aéroport. Hab fudud oo lagu tago Xarunta Magaalada Marseille. Shilku wuxuu baxaa qiyaastii 15-20 daqiiqo kasta, wuxuu qaadanayaa 25 daqiiqo wuxuuna si toos ah u aadayaa baska/tareenka St. Charles halkaas oo aad ka qaadan karto metro ama aad ku aadi karto hoteelkaaga. Laga bilaabo Maajo 2018, qiimuhu waa € 8.30 hal dhinac ama .13.40 XNUMX safar wareeg ah.
Marseille ayaa aragta TGV tareenada ka yimaada Paris (3 saacadood) iyada oo loo marayo Lyon (1hr 45min), Nice (2 saacadood) iyo Brussels (5 saacadood). Si gaabis ah Isku-duwaha tareenadu waxay ku xirmaan magaalooyinka aan ku xirnayn shabakadda TGV. Dhammaan tareennada gudaha Faransiiska waxaa maamula SNCF. Intaa waxaa dheer, Eurostar hadda waxay bixisaa adeeg toos ah sanadka oo dhan oo toos ah laga bilaabo London (6) saacadood) iyada oo ilaa shan toddobaad laga baxayo inta lagu jiro xilliga xagaaga iyo hal illaa laba inta lagu jiro xilliga qaboobaha.
Safarka ka imanaya Spain, waxaa jira adeeg maalinle ah oo loo yaqaan 'AVE service' oo ay wada shaqeeyaan shirkado tareen Faransiis iyo Isbaanish ah oo ka kala socda Barcelona (4½ saacadood), iyo Madrid (8 saacadood). Haddii kale, waxaa jira xiriirro isdaba joog ah oo loo maro Cerbère iyo ka dib oo loo maro Barcelona iyadoo la adeegsanayo tareenno isdaba-joog ah. Waxaa sidoo kale jira maalinle Thello tareenka ka imanaya Milan, Talyaaniga (4hr 45min). Tareenkaan ayaa sidoo kale istaaga magaalada Monaco.
gobolka ter waa kuwa soo noqnoqda oo ku xira magaalooyin dhowr ah oo u dhow waxayna noqon karaan bedel ka jaban ka dibna loo adeegsado tareenada TGV safarada gaagaaban.
Saldhigga weyn ee Marseille waa Gare Saint-Charles, oo ku taal Square Narvik dhowr boqol oo mitir oo waqooyi ka xigta Xarunta magaalada ee buuxda. Waa socod gaaban oo ka socda Canebière iyo Dekedda Hore, laakiin saldhigga ayaa xoogaa sare u kacsan oo laga yaabo inaan lagu habboonayn haddii aad haysato boorsooyin culus. Saldhiggu wuxuu furan yahay inta u dhaxaysa 04:30 ilaa agagaarka 01:00, macluumaadka ku saabsan bixitaannada iyo imaanshaha iyo sidoo kale macluumaad wax ku ool ah waxaa laga heli karaa Gares SNFC shabakad
Eurolines waxay leedahay xiriiro badan dhamaan Yurub. Laga soo bilaabo Marseille waxaa jira ugu yaraan xiriir toos ah Barcelona, ​​Prague iyo Tangier.
Waxa kale oo jira xafiis Eurolines ah oo ku yaal 3 Allée Léon Gambetta; Haddii aad ka degto jaranjarooyinka waaweyn ee dhinaca koonfureed ee istaanka, raac wadada ilaa aad ka timaado isgoys u eg afar gees. Xafiisku wuxuu ku yaal gacantaada bidix.
Gare Routière St Charles (boosteejada basaska) (oo ku xigta saldhigga weyn ee tareenka St. Charles; marin looga maro Platform N),. M Tu Th F 07: 30-19: 00; W Sa Su fasaxyada: 08:00 - 13:00, 14:00 - 19:00. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Tikidhada dhammaan shirkadahaas waxaa laga iibsan karaa Sobus.
Marseille waxay si aad ah ugu xiran tahay inta badan magaalooyinka Faransiiska iyada oo loo marayo waddooyin waaweyn. Sida had iyo jeer France gudaheeda waddooyinkaas waa qaali laakiin waa wax -ku -ool, raaxo iyo degdeg. Marseille waxay ku dhowdahay 8 saacadood oo baabuur ah oo ka socota Paris, 2 saacadood oo ka socota Nice, 1hr 30min oo ka socota Montpellier, 4 saacadood oo ka socota Toulouse iyo 3 saacadood oo ka socota Lyon. Si kastaba ha ahaatee, ogow in ku wadista bartamaha Magaalada ay tahay qarow - baabuurkaaga dhig meel ammaan ah kuna dheji gaadiidka dadweynaha markasta oo aad awoodid.
Marseille waxay leedahay deked weyn. Waxaa jira adeegyo toos ah oo maalinle ah oo loo maro Marseille oo ka kala yimaada Ajaccio, Bastia, Porto Torres, Porto-Vecchio, iyo Propriano iyo sidoo kale doomaha mara badda Mediterranean-ka ee ka kala socda Oran iyo Algiers ee Algeria, badiyaa hal ama laba jeer isbuuciiba.
Waxaa ku yaal dhowr dekedood dekedda, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad si fiican horay u sii hubiso nooca aad ka dhoofayso.
Haddii aad ku safreyso baaskiil, waa inaad timaaddaa maalinta hore si looga fogaado inaad ku lumiso magaaladan ballaaran. Khariidadaha ka socda xafiiska dalxiiska waxay diirada saarayaan bartamaha magaalada, marka waa inaad la timaadaa khariidadaada si aad ugu dhex wareegto xaafadaha magaalada.
Baska, tramway, subway
Marseille waxaa u adeegta nidaamka taraafikada, Régie des Transports de Marseille (RTM) oo ka kooban 2 khadadka tareenka dhulka hoostiisa mara, 2 khadadka taraamka iyo 74 khadadka basaska. Haddii aad wax dhibaato ah oo xagga dhaqdhaqaaqa ah qabtid, ama aad kursi kursi ku leedahay ama aad ilmo ku leedahay kursiga riixista, waa inaad ogaataa in ku dhowaad xarun kasta oo metro ay ku taal tallaabooyin meel ka mid ah qaarna ay leeyihiin dhowr duulimaad oo jaranjaro ah - ku dheggo taraamyada iyo basaska kuwaas oo ah xulasho ka fiican.
Tigidhada baska / métro waxaa laga iibsan karaa kafateeriyada, saldhigyada dhulka hoostiisa mara, ama baska; waxaa lagula talinayaa inaad iibsato tigidh safarro badan ah (carte libertés) € 14 (10 safar), oo aan lagu iibin basaska. Tirada wareejintu waa mid aan xadidneyn (oo ay kujirto safarada soo noqoshada) gudaheeda inta udhaxeysa hal saac inta udhaxeysa safka hore iyo wareejinta ugu dambeysa ee dhamaan shabakada (waa inaad ku ansaxisaa gelitaan kasta oo baska ah). Tareenka dhulka hoostiisa mara wuxuu u dhexeeyaa 05:00 ilaa 00:30. Nidaamka taraamka wuxuu shaqeeyaa illaa 00:30 7 maalmood usbuucii. Inta badan jidadka basaska ma shaqeeyaan wixii ka dambeeya 21:00 am ama wixii ka dambeeya, in kasta oo shabakad kooban oo basaska habeenkii ah (Fluobus) ay ku shaqeeyaan adeegyo aan caadi ahayn (oo keliya qiyaastii 45-60 daqiiqadood ama wixii la mid ah) illaa abbaaraha 00:30 ama wax la mid ah. Isticmaalka taksi ayaa lagugula talinayaa haddii aad u baahan tahay inaad safarto wixii ka dambeeya 21:00. Ma jiro wax adeeg ah haba yaraatee 1-da Maajo.
Bogagga Pilote, waxaa ku jira dhammaan jadwalka basaska, taraamka iyo metro laakiin way ka sahlan tahay akhrinta goobaha RTM. Intaa waxaa sii dheer, degelkani wuxuu ku celcelinayaa jadwalka inta badan gaadiidka ee wadaagga wadaagga (taraamka, basaska dhexmara, tareenada gobollada) waxayna suurtogal ka dhigeysaa in laga raadsado safarrada Marseille iyo isu-dhowaanshaha magaalooyinka.
Wareejinta garoonka diyaaradaha waxaa loo heli karaa .8.30 1 waddo kasta oo loo maro ama looga baxo Gare St Charles. Tigidhada waxaa laga iibsan karaa qolka yar ee u dhexeeya Hall 3 iyo Hall 4/20 ee terminalka weyn iyo kiosk gaar ah oo ku yaal Gare Routière cusub, ka dib Voie N ee Gare St Charles. Basku wuxuu socdaa 10kii daqiiqaba 30, 50, iyo 30 daqiiqo saacad dhaaf. Safarku wuxuu ku saabsan yahay XNUMX daqiiqo. Baska ayaa leh Navette Aeroport Gare St Charles oo saaran. Laga soo bilaabo Gare St Charles, metro waxay kaa heli kartaa hudheelada badankood.
Tigidhada Metro waxay u oggolaadaan wareejinta aan xadidnayn baska ama taraamka 1 saac gudahood marka ugu horreysa ee isticmaalka saldhigga € 1.70 laakiin kuma jiraan dib-u-soo-gal (1 saac xaddidan) metro. Tigidhka maalinlaha ah (carte journée) waa 5.20 XNUMX.
Doon Ferry ah ayaa ka gudubta Old Harbor (Port Vieux). Waa soojiidasho dalxiis oo lafteeda loo yaqaan doonyaha ganacsi ee ugu gaaban Yurub. Doomo kale oo dhowr ah ayaa soo jeedinaya isku xirnaanta L'Estaque, Les Goudes, La Pointe-Rouge iyo Le Frioul. Waxay ku kacayaan trip 10 safar soo noqosho ah laakiin 1 usbuuc oo RTM pass ah (€ 14.50; baasaboor iyo sawir midab leh ayaa loo baahan yahay) ayaa ka kooban iyaga (marka laga reebo jasiiradda Frioul) oo aad u xiiso badan. Sidoo kale waxaa jira shirkado dhowr ah oo soo jeedinaya safarro doon oo Calanque ah, sida dalxiisyada yaryar.
Ka fogow qaadashada baabuurkaaga haddii ay suurtogal tahay. Marseille, ugu yaraan Xarunta, waxay leedahay waddooyin cidhiidhi ah, waddo hal mar ah, isbedelo haad aan caadi ahayn iyo wixii la mid ah oo waallida ka dhigi kara dadka deegaanka iyo kuwa aan u dhalanba. Darawalada maxalliga ah waxay leeyihiin sumcad u qalma cabsi la'aan - gaar ahaan haddii ay saaran yihiin laba taayir. Intaa waxaa dheer, Marseille waxay leedahay qaar ka mid ah ganaaxyada baabuurta la dhigto ee ugu hooseeya Faransiiska - ganaaxa baarkinka marar dhif ah ayaa la dhaqan geliyaa sidaas darteed waxaad ka heli doontaa baabuurta la dhigto (mararka qaarkoodna laba la dhigto) meel kasta.
Sababtoo ah tunnel -ka cusub ee la dhisayo si loo isku dayo in lagu yareeyo qaar ka mid ah dhibaatooyinka gaadiidka ee Marseille, nidaamyada hagista dayax -gacmeedka sida Tom Tom waxay u badan tahay inay yihiin kuwo waqtigoodu dhammaaday oo halis ah haddii la raaco. Tusaale ahaan, raacitaanka Tom Tom ee Bartamaha Marseille waxay kugu wareejin kartaa aagagga cusub ee dadka lugaynaya ama khadadka taraamka. Nidaamka hal-dhinac ah ayaa sidoo kale gebi ahaanba is-beddelay.
Ka taxaddar darawalada tagaasida xun. In kasta oo aysan badnayn, waxaa jira inyar oo ride 20 raaciddu waxay si dhakhso ah u noqon kartaa € 40 raacid. Haddii aad u malaynayso in lagu khiyaaneeyey hel lambarka taksiilaha (xagga dambe ee gaariga, badanaa daaqadda) oo aad Xafiiska Dalxiiska ee 4, La Canebière (oo u dhow Le Vieux Port) oo la hadal wakiil, waxay waa la soo celin karaa lacagtaadana waa lagaa soo celin doonaa. Waxay sidoo kale heli doonaan taksiilaha dhibaato weyn.
Marseille waxay haysaa nidaamka kireysiga wareegga le vélo aad u fiican (laakiin tiro aad u yar oo wadooyin wareeg ah), tani waxay suurtagal ka dhigeysaa in si dhaqso leh oo macquul ah loogu wareego magaalada. Waxay ku kacaysaa € 1 isbuucii rukunka. Mar kasta oo aad kireysato baaskiil, 30-ka daqiiqo ee ugu horreeya waa bilaash, ka dibna saacad kasta qiimaheedu waa € 1. Waxaa jira deebaaji € 150 kaas oo lagaa qaadi doono haddii aadan si sax ah u celin baaskiilka.
Port Vieux (deked duug ah) Daawashada kalluumeysatada oo kaydkooda ku iibinaya xaraash waa lama huraan. Imaanshaha Marseille ee Vieux-Port fiidkii xagaaga waa wax aadan waligaa iloobi doonin. Waxaad ku daawan kartaa showgan adoo aadaya jasiiradaha Frioul ama Chateau d’If oo aad dib ugu laaban karto galabtii. sidoo kale waxaa jira aragti wanaagsan oo ku saabsan dekedda ka timid Palais du Pharo (Pharo Palace). Jidka caanka ah ee Canebière ayaa si toos ah hoos ugu sii dhacaya dekedda. Si kastaba ha noqotee Canebière maahan mid xiiso leh in kasta oo ay sumcad leedahay. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Basilique Notre Dame de la Garde, Rue Fort du Sanctuaire (Bas 60 wuxuu ka baxayaa Vieux Port ilaa ND de La Garde. Baarkinka Bilaashka ah ee laga galo albaabka kaniisadda.). 07:00 - 18:15 xilliga qaboobaha, 07:00 - 19:15 xagaaga. Kaniisadda weyn ee magaalada indha indheysa. Kalluumeysatadii hore waxay doomahooda ku barakeyn jireen kaniisaddan. Weli waxaad arki kartaa moodooyin badan oo doon ah oo sudhan kaniisadda dhexdeeda. Halkaas waa meesha ugu wanaagsan ee laga arko magaalada. Waad isticmaali kartaa tareenka dalxiiska ee ka yimaada Vieux Port si aad u gaarto kaniisadda - waad ka bixi kartaa tareenka, hareerahaaga fiiri kartaa isla markaana raaci kartaa tareen dambe oo aad dib ugu noqoto dekedda. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Abbey ee Saint Victor, 3 Rue de l'Abbaye. (la cusbooneysiiyay May 2015)
L'Hotel de Ville. Hoolka Magaalada Marseille (la cusbooneysiiyay May 2015)
Le Panier (Magaaladii hore ee Marseille) (Magaalada hore waxaa si sahlan looga soo geli karaa Dekedda Vieux. Laguma talinayo in halkaas lagu kaxeeyo.) Le Panier (oo macnaheedu yahay dambiil af Faransiis) waa Xarunta taariikhiga ah ee magaalada. Degmadan waxaa lagu gartaa waddooyin badan oo cidhiidhi ah oo dhaadheer. Xafiiska dalxiiska wuxuu qabanqaabiyaa socdaal la hagayo oo af ingiriis ah oo ku yaal Old Town Sabti kasta 14:00. Waxaad safarkaaga ka bilaabi kartaa Vieux-Port oo aad ku dhammayn kartaa Mucem ee dhanka kale. Raadinta lagu taliyay ee degmadan ayaa sidoo kale waxaa soo jeediyay xafiiska dalxiiska. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Kaniisadda Marseille (Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille ama Cathédrale de la Major), Place de la Major (Ka soco Mucem ama raac baska aadka u yar ee 82 ama 49) La Major)). 10:00 -19: 00. Kaniisad Byzantine-Roman ah oo ku taal dhinaca galbeed ee Le Panier rubuc. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
La Vieille Charité, 2 Rue de la Charité (dhinaca woqooyi ee Le Panier rubuc). waa taallo duug ah oo la yaab leh, guryo sadaqadeed hore oo loogu talagalay dadka saboolka ah, oo hadda martigaliya madxafyo iyo carwooyin. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Koorsooyinka Belsunce. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Dhig Castellane. Iyada oo leh il weyn / tiir / farshaxan ku yaal bartamaha, oo leh shineemo aad u fiican iyo kafateeriyaal ku xeeran. Waxaa jira meel kale oo la yiraahdo La Castellane: waa xaafad sabool ah oo ka tirsan Marseille halkaas oo uu ku dhashay ciyaaryahan caan ah Zinedine Zidane. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Koorsooyinka Julien (metro stop Cours Julien / Notre Dame du Mont). Aag hangout oo leh dukaamada buugaagta, kafateeriyada, ilaha biyaha, iyo garoon lagu ciyaaro kuwa yaryar. Waa aag casri ah oo Marseille ah. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Dhig Jean Jaurès. La Plaine waa magaca maxalliga ah ee loo yaqaan 'Place Jean Jaurès' una dhow Cours Julien. Khamiista iyo Sabtida subax kasta Suuqa Plain waa meesha laga adeegto. Haddii aad halkaas joogtid waqti hore waxaad samayn kartaa heshiisyo aad u wanaagsan, xitaa haddii waxa aad ka heli doonto ay jiraan mararka qaarkood "tombé du camion" (baabuurka ka soo dhacay) sida mid ka mid ahi ku yiraahdo Marseille. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Noailles rubuc (metro Noailles). Ku safan dukaamada Carabiga iyo Indo-Shiinaha qaar ka mid ah waddooyinka waxay qayb ka noqon karaan suuq ku yaal Algeria. Meel xiiso leh. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Palais Longchamp (; taraamka #2, wuxuu joogsadaa “Longchamp” ama “Cinq Avenues”). Waxaa ku yaal Musée des beaux-arts iyo madxafka taariikhda Dabiiciga ah. Beerta ku xeeran (Parc Longchamp) waxaa ku qoran Wasaaradda Dhaqanka Faransiiska mid ka mid ah Jardiinooyinka xuska mudan ee Faransiiska. Boulevard Longchamp wuxuu ku xiraa Xarunta Magaalada. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Fort Saint-Jean, Parvis Saint Laurent (Ku soco Galbeed dhinaceeda woqooyi ee dekedda hore illaa aad ka dhufato Fort). Furan ilaa 19:00. Fort Saint-Jean waa qalcad ku taal dhamaadka Woqooyi-Galbeed ee Dekedda Old, oo la dhisay 1660 Louis XIV. Qalcadda sidoo kale waxay martigelisaa Matxafka "Musée des Civilizations de l'Europe et de la Méditerranée", laakiin qalcadda lafteeda ayaa dadweynuhu u heli karaan lacag la'aan, waxayna mudan tahay booqasho. Waad ku dhex socon kartaa qalcadihii hore, waxaad ku dhex mari kartaa jardiino yar, waxaad ku raaxeysan kartaa muuqaalka hore ee dekedda hore ama badda, ama waxaad ku dul socon kartaa buundooyinka lacag la’aanta ah ee madxafka ama kaniisada Saint-Laurent Fort waxay sidoo kale bixisaa 10-daqiiqo fiidiyow ah oo ku saabsan taariikhda Marseille iyo Fort. gelitaan bilaash ah. (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Vallon des Auffes (Baska 83, Joogso Vallon des Auffes oo jaranjarada qaado.). Yar iyo waqti lumis dekedda dhaqanka ee kalluumaysiga, oo u dhow Xarunta magaalada. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafyada iyo meelaha xiisaha leh
Musée des ilbaxnimada de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM). Matxafkii ugu horreeyay ee Faransiis ah ee ka baxsan Paris. Waxay leedahay bandhigyo waaweyn oo joogto ah iyo kuwo ku meel gaar ah. Qaab dhismeedkeedu wuxuu isku daraa qaabdhismeed aad u casri ah (sanduuq mugdi ah) oo leh qalcad duug ah, oo leh kabo isku xidha labada qaybood ee madxafka. (la cusbooneysiiyay May 2015)
Musée des Docks Romains, 10 Meel Vivaux,. Waxaa loo dhisay in lagu keydiyo waxyaalaha qadiimiga ah ee bakhaarada hore ee dekeddii hore laga soo bilaabo xilliyadii Fenisiya iyo Roman
Musée d'Archéologie méditerranéenne (Archéologie-Graffiti-Lapidaire), Xarunta de la Vieille Charité, 2 Rue de la Charité, 13002 Marseille. Tel: 04 91 14 58 59, Fakis: 04 91 14 58 76
Qabuuraha Dagaal ee Mazargues, Wadada Luminy. Qabuuro dagaal oo loogu talagalay Shuhadada Dagaalkii Koowaad iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka oo ka socda xulafada, gaar ahaan qoryaha iyo orodyahannada Hindida iyo Shiinaha. Meel aad u deggan, waa meesha ku habboon in mararka qaarkood lagu fekero dadka naftooda u huray inay na siiso xorriyadda aan maanta ku raaxeysanayno.
la Cornice: socod lug ah iyo waddo xeebta ku taal oo bixisa aragtiyo qurux badan oo xagga badda ah, Chateau d'If oo xagga koonfureed ah, iyo les Calanques oo dhinaca bari ah.
Parc Borély (Xadiiqadda beerta). Beer weyn oo weyn, oo 300 mitir u jirta badda. Ka dib firaaqada nasashada kadib waxaad ka cabtaa Escale Borely (meel leh maqaaxiyo badan iyo baarar xeebta ku yaal) si aad u aragto qorrax dhaca.
Unité d'Habitation. Waxaa naqshadeeyay Le Corbusier, iyo mid ka mid ah 17 ka mid ah dhismayaashiisa si loogu qoro liiska UNESCO ee Dhaxalka Adduunka. Dhismaha ayaa dadka aan akhlaaqda lahayn u yaqaan "la maison du fada" (guriga nacaska). Dhismuhu wuxuu ka kooban yahay jid wax laga iibsado, kaniisad, iskuul carruureed iyo guryo. Waad geli kartaa saqafka oo waxaad ku raaxeysan kartaa muuqaalka quruxda badan ee Marseille inta u dhexeysa buuraha iyo badda (10: 00-18: 00). Dabaqa 3aad sidoo kale waxaa ku yaal baarar / makhaayad / hoteel. Qaado bas 21 laga bilaabo metro Rond-Point du Prado. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
The Calanques. Calanques waa taxane yar oo fjords ah oo dhanka koonfureed ka xiga Marseille una dhow Cassis. Laga soo bilaabo Marseille kuwan waxaa sida ugu wanaagsan looga heli karaa xarunta jaamacadda ee Luminy oo lagu tagi karo bas # 21 oo ka tagaya Rond Point du Prado kana soo horjeedda Stade Velodrome ama Vieux Port (lacagta basku waa 1.50 19). 'Fjords' waa wax la yaab leh badda buluugga ah ee cajiibka ah iyo dhagaxa weyn ee lime qaaliga ah. Socodka xeebta ee Cassis ilaa Marseille waa mid cajiib ah, waxaa lagu sameyn karaa hal maalin oo xawli ah. Jidka (GR) si cad ayaa loo calaamadeeyay (xargaha gaduudan iyo kuwa cad). Luminy, waxaad bidix ugu leexan kartaa Cassis ama midig Callelongue (bas ayaa kugu xiraya baska # 21, kaasoo kugu celinaya Place Castellane ee bartamaha, ama waxaad kaloo isticmaali kartaa bas # 20, 23, XNUMX). Laga bilaabo Juun ilaa Sebtember qaar ka mid ah Calanques ayaa loo xiri karaa khatarta sare ee dabka.
The Château d'If Château d'If waxaa laga dhisay jasiirad yar oo ka baxsan magaalada, markii hore qaab dhismeed difaac ah oo markii dambe loo isticmaalay xabsi. Waxay caan ku tahay meesha ay kaga jirto riwaayadda Tirinta Monte-Cristo waxaa qoray Alexandre Dumas. Doomaha dalxiiska ayaa ka baxa Vieux Port.
Allauch iyo Qorshee de Cuques waa wada-hadallo ku yaal bannaanka Marseille, labadaba waxaa lagu barakeeyey baadiyaha quruxda badan. Waad raaci kartaa metro ka dibna bas # 142, # 144. Qaado dalxiis oo u lugee lugaynta buuraha, aragtiyada Marseille iyo Mediterranean-ka waa kuwo la yaab leh.
L'Estaque iyo côte buluug L'Estaque waa deked kalluumeysi oo hadda bilaabeysa inay ka faa'iideysato awooddeeda dalxiis iyada oo loo marayo xiriirkeeda Cézanne. Waxaad halkaa kaga imaan kartaa baska # 35 adiga oo ka socda.
Waad booqan kartaa maqaayadaha cajiibka ah iyo makhaayadaha. Waad tagi kartaa oo aad samayn kartaa waxyaabo badan oo xiise leh sida quusitaanka iyo doonyaha la kireysto! Ku durdurradiisa (fjords) inta udhaxeysa Marseille iyo La Ciotat waa aag fuula isboorti oo caan ah. Iyo dabcan, haddii cimiladu hagaagsan tahay, waxaad si fudud u aadi kartaa xeebta!
Daawo kubbada cagta Vélodrome, oo ah hoyga Olympique de Marseille. Waxay ka ciyaaraan Ligue 1, heerka ugu sarreeya kubadda cagta Faransiiska, waxayna inta badan u qalmaan tartamada Yurub. Garoonka, oo qaadi kara 67,394, wuxuu ku yaal degmada St Giniez oo 2 km koonfur ka xigta Xarunta Magaalada, adeegso saldhigga Metro Rond-Point du Prado. Ka iibso tigidhada ciyaarta onlaynka ama dukaanka L'OM ee Dekedda Vieux.
Dhacdooyinka maxalliga ah ee Marseille
Marseille waxay ahayd Caasimad Dhaqameedka Yurub sanadkii 2013.
Iiddii Avec le Temps taas oo ka dhacda guga kasta Espace Julien (mid ka mid ah hoolalka xafladaha waaweyn ee magaalada) waxay ka kooban tahay riwaayado badan oo farshaxanno Faransiis ah, noocyo badan (Pop, Chanson, Rock, Folk.)
La Fête Bleue, "Bandhigii Buluuga ahaa" dhamaadka Juun. Bandhigyo badan (riwaayadaha, saadaalinta filimka, bandhigyada) ayaa ka dhaca meelo badan oo magaalada ka mid ah, mowduucuna waa midabka buluugga ah.
La Fête du Panier, dhamaadka Juun. Inta lagu jiro laba maalmood, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto riwaayado, riwaayado iyo suuqyo ku yaal aagga ugu da'da weyn magaalada.
Le FDAmM or Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille, waa xafladaha qoob ka ciyaarka ugu weyn ee Marseille wuxuuna socdaa xagaaga oo dhan.
Le festival du Plateau, ee Koorsooyinka Julien, bishii Sebtember.
Bandhig faneedka Marsatac waxay dhacdaa dhammaadka Sebtember waxaana la abuuray 10 sano ka hor. Fanaaniinta halkaas ka soo shaqeeyay waxay ahaayeen tusaale ahaan Cadowga Dadweynaha, Nouvelle Vague, dEUS, Mogwai, Fishiro, Amon Tobin, De La Soul, Laurent Garnier, Aphex Twin….
La Fiesta Des Suds, Dock des Suds, Oktoobar waa xaflad caan ah oo loogu talagalay muusikada adduunka. Waad kaqeyb geli kartaa riwaayadaha fanaaniinta sida Aasiyada Dub Aasiya, Buena Vista Bulshada Naadiga, Cesaria Evora.
La Foire aux Santons waa suuq Kirismas aad u qurux badan oo lagu qabtay dabayaaqadii Nofeembar meel u dhow Canebière iyo Vieux Port. Provence waa guriga santons, figulootta terracotta ee loo isticmaalo dhalashada maqaarka ee loo yaqaan 'crèches'. Ganacsatada qaarkood iyo kaniisado badan ayaa soo bandhigaya xannaanooyin iyaga u gaar ah.
Xeebta Le Pointe Rouge
Daacad noqo, xeebaha Marseille had iyo jeer ma fiicna. Intaa waxaa sii dheer iyadoo ku xiran cimilada, way nijaasayn karaan.
Si kastaba ha ahaatee xeebaha yar yar ee ku yaal bartamaha Magaalada inta u dhaxaysa dekedda La Pointe Rouge iyo dekadda La Madrague ayaa ka nadiifsan, ka fiican oo badiyaa wax yar ka yar.
Waxa kale oo ku yaal xeebo ciid wanaagsan Waa 'Astaan' - raac bas # 35 oo ka baxa Joliette metro / tram stop ilaa dhamaadka safka (20-25 daqiiqo).
Marseille waxay hoy u tahay jaamacado badan waxayna ku caanbaxday waxbarasho weyn. Jaamacaduhu waxay leeyihiin waxyaabo farabadan oo diiradda saaraya farshaxanka ilaa ganacsiga.
Diirada ugu weyn ee dhismaha
Institut de Mathématiques de Luminy (Luminy Institute of Mathematics), 163, avenue de Luminy,. Diirada ugu weyn ee Xisaabta.
Maareynta Euromed École de (Iskuulka Maamulka ee Euromed), 65, Boulevard Balthazar Blanc,, fax: + 33 491 827 821.
Diiradda ugu weyn ee ganacsiga (Maareynta Ganacsiga iyo Ganacsiga Caalamiga ah)
Jaamacadda Aix-Marseille III (Aix-Marseille University III), 3, wadada Robert-Schuman,.
Guud ee jaamacadda
Faculté de Médecine de Marseille (Marseille Kulliyadda Caafimaadka), 27 Boulevard Jean Moulin,.
Diiradda ugu weyn ee Caafimaadka Caafimaadka iyo Daawooyinka
Halka lagu dego Marseille
Waa salaaman tahay Marseille hostel, 12 rue de Breteuil, 13001 Marseille ,. Waxay ku taal aag aamin ah oo ku yaal bartamaha Marseille, “Port Vieux”. Waxay bixiyaan qolal wadaag ah oo qaadaya 6 qof qiimaha kaliya ee € 20 kaliya. 24/7 soo dhaweynta & amniga. shaqaale ku hadla luuqado badan, bandow la'aan; Boos celinta khadka tooska ah ee internetka; Hoy ka kooban 6 qof qolal waaweyn oo leh santuuqyo. Quraac la bixiyo (Baguette faransiis ah, subag & marmalade, miraha, kafee sida la doono); Gogosha dharka waxaa ka mid ahaa; Qiimaha keliya € 20 / qof / habeenkii. Adeegyada: dhar dhaqida, dukaanka shandadaha, madbacad, baaskiilada magaalada oo bilaash ah; Wi-fi bilaash ah meelwalba, kombiyuutarka skype-diyaarka u ah meesha qolka lagu dhigo. Balakoonka qoraxda leh, qolka fadhiga ee raaxada leh, jikada martida, shaashadda TV-ga weyn ee leh marinnada caalamiga ah
Hoteelka Lutetia. Laga soo bilaabo € 60. Inta udhaxeysa Saldhiga Tareenka ee St Charles iyo dekedii hore +33 491 508 178. Guri casri ah oo la cusbooneysiiyay oo leh internet bilaash ah, jawi aad u wanaagsan, iyo shaqaale saaxiibtinimo leh.
Auberge de Jeunesse Marseille - Bois Luzy, Allée des Primevères,. soo dhaweynta 09:00 - 10:00, 17:00 - 21:00. Hoteelku wuxuu ku yaallaa chateau oo aan aad ugu dhaweyn Xarunta Magaalada, qiyaastii 15 daqiiqo ayuu ka socdaa saldhigga metrooga. (la cusbooneysiiyay May 2016)
Adagio Marseille Prado Plage, 46 rue des Mousses,. Si dhammaystiran loo cusbooneysiiyey, degenaanshuhu wuxuu ku yaal bartamaha xaafadda Le Prado, 100 mitir xeebta, si fudud ayaa looga tagi karaa Avenue du Prado ama Corniche. Waxay ku taal xaafad deggan oo deggan meel u dhow maqaaxiyo tiro badan iyo Palais des Congrès. Boggan wuxuu qaadi karaa dadka dhaqdhaqaaqa yaraaday (naafonimada yar yar, dadka waayeelka ah) oo ay weheliyaan galmo awood leh iyo qoysas leh carruur yaryar. (la cusbooneysiiyay May 2016)
Hoteelka Kyriad Rabatau, Boulevard Rabatau Daniel Matalon 162 (Fogaanta Vieux-Port 3 km),. Nadiifi hudheelka aasaasiga ah. Qolka waxaa ku jira qaboojiye, musqul iyo biyo kululeeyaha. Saldhigga metro ee kuugu dhow Sainte-Marguerite Dromel wuxuu ku yaal meel u jirta 1.2 km hudheel ilaa koonfur.
Hotel Cusub wuxuu leeyahay afar kala duwan hudheelada Marseille ku habboon baahiyaha shaqsiga. Joogitaan xasilloon oo cagaar ah, ayaa Hoteel Cusub Bompard waxay si gaar ah ugu habboon tahay, iyadoo ku dhow bartamaha magaalada.
Hotel La résidence du Vieux Port Marseille. Si dhammaystiran loo cusbooneysiiyey 2010-kii qaabkii 1950-meeyadii oo maamuus u ah Charlotte Perriand iyo Le Corbusier. Huteelka ayaa ku siiya aragtiyo qurux badan Marseille balakoonadeeda iyo sadax qol oo dabaqa kore ah oo leh dabaqyo ka hadlaya Old Harbor iyo Kaniisada. Qolalka oo dhan waxay u jeedaan dekedda.
Galbeedka La Joliette ugu fiican, 49 Avenue Robert Schuman, 13002,. Gelitaan: 14:00, out-out: 10:00. Nadiifi, hudheel raaxo leh oo ku yaal meel deggan meel u dhow xarunta tareenka tareenka ee Joliette. Meel wanaagsan oo loogu talagalay dekedda iyo Le Panier.
Dekadda Novotel Marseille Vieux, 36 Boulevard Charles Livon,. Dalxiis afar-xidigle ah oo u dhow jardiinooyinka Pharo oo fiiriya Dekedda Vieux oo leh aragtiyo cajiiba. Meesha lagu nagaado inta badan shakhsiyaadka bulshada.
Le Petit Nice Passedat, 17 Rue des Braves,. Mid ka mid ah hudheelada ugu caansan magaalada, villaan ku ag yaal baddu wuxuu ku faanaa maqaayada kaliya ee gobolka laga cuno ee Michelin 3-star.
Isgaarsiinta ee Marseille
Le Vieux Port waxay leedahay marin WiFi, oo laga heli karo baararka badan iyo maqaayadaha, iyo meelaha qaar ee wadada (in kasta oo aysan jirin meelo badan oo la fariisto). ESSID ee ay adeegsaneyso waa “Marseille sans fil” oo shabakada lama kaydin karo. Marka ugu horeysa ee aad xirmid, biraawsarkaaga ayaa kuu kaxeyn doona bog ku saabsan adeegga oo ku qoran Faransiis: si fudud u riix "Cliquez ici" ("Guji halkan") boggaas si aad ugu isticmaasho shabakadda si xor ah
Wi-Fi waxaa loogu dhawaaqaa waay-fee ama wiffy Faransiis - xitaa dadka ku hadla Ingiriiska. Dalbashada Maxay-Fye badiyaa waxaa lagu soo dhaweynayaa muuqaal madhan.
In badan oo ka mid ah taariikhdeeda - iyo ilaa maantadan la joogo - Marseille dad badan oo Faransiis ah ayaa u arkaayey magaalo dambi ka buuxdo, tanina nasiib darro maahan mid gebi ahaanba aan loo baahnayn. Si kastaba ha noqotee, dalxiisayaashu waxay helayaan waqti fiican iyagoo qaadanaya taxaddarrada aasaasiga ah, bartamaha magaaladuna aad ayey u ammaan tahay.
Si kastaba ha noqotee, boobka iyo jeebabka si aad ah ayey u kordheen, markaa iska ilaali inaad xamuul qiimo leh aadna fiiriso hareerahaaga, sida magaalooyinka badankood. Inta badan xaafadaha waqooyiga (Kartida woqooyi), marka laga reebo kuwa sida weyn looga xusi karo L'Estaque iyo Château-Gombert, ayaa ka mid ah kuwa ugu halista badan Faransiiska ee ka baxsan aagga Paris, waana in laga fogaadaa dalxiisayaasha. Mahadsanid, ma jirto sabab loo aado halkaas.
Intaas waxaa sii dheer, Marseille waa mid ka mid ah magaalooyinka fara ku tiriska ah ee Faransiiska ee weli haysta Mafiyada iyo baandooyinka.
Aagga agagaarka Boulevard Michelet waxaa ku yaal dhillooyin waana in laga fogaadaa habeennada kubbadda cagta, maxaa yeelay waxaad la kulmi kartaa xanaaq iyo sakhraamiin Olympique de Marseille hooligans ah.
Shiinaha, 20 Boulevard Carmagnole,, fax: +33 4-91-32-00-08.
Indonesia, 25 Boulevard Carmagnole,, fax: + 33 491 714032. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Japan, 70, Avenue de Hambourg,, fax: +33 4 91-72-55-46.
Boqortooyada Ingiriiska, 10.3 Rue des Docks ,. MWF 09: 30-12: 30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
United States, Dhig Varian shiil,, fax: +33 4-91-55-56-95.
Aix-en-Provence: Waxaa si fudud ku gaadhay tabobare Cartreize ama SNCF train. Waxaa jira tababarahan heeganka qaaska ah oo ka socda saldhigga St Charles oo qaata 30-40 daqiiqo.
Kassis: dalxiis xeebeed soojiidasho leh oo ku yaal koonfur-bari magaalada Marseille.
Adagio Helitaanka Marseille Plan-De-Cuques Hotel
Hoteelka Adagio Access Marseille Prado Perier
Hoteelka Adagio Access Marseille Saint Charles
Hoteelka Adagio Marseille Republique
Alliance Hotel Futur Novotel Xarunta Marseille Prado
Hoteelka Bellevue Marseille
Hoteelka Galbeed ee ugu Fiican Du Mucem Marseille
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Marseille Aeroport
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Marseille Bonneveine Prado
Hoteelka ugu wanaagsan Western La Joliette Marseille
Hoteelka Galbeedka La Rade ee ugu Fiican Cassis
Huteelka Citadines Castellane Marseille
Huteelka Citadines Prado Chanot Marseille
Raaxo Hotel Marseille Aeroport
Hoteelka Edmond Rostand Marseille
Hotel Kyriad Marseille Xarunta Paradis Prefecture Marseille
Huteelka Montgrand Marseille
Hoteelka Novotel Aeroport Porte De Marseille
Huteelka Mercure Marseille
Hoteel Cusub Bompard Corniche
Huteelka Cusub ee Marseille
Hotel Cusub Saint Charles Marseille
Hoteel Cusub Vieux Port Marseille
Hoteelka Novotel Marseille Est
Tayada Hotel Marseille Vieux Port
Deganaanshaha Adonis Adriana Marseille
Toddoba Urban Suites Marseille Hotel
Xiddigaha Hotel Marseille
Suite Novotel Marseille Xarunta Euromed
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Faransiiska Xalaal > Hagaha Socdaalka Marseille Xalaal
Hagaha Socdaalka Mae Sot Halal